गहिरो निन्द्रा पाउने यी सूत्र | Kendrabindu Nepal Online News
11467740 535048 4443277 6489415
२४ श्रावण २०७४, मंगलवार १८:३७
केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, २४ साउन ।
शरीर र मनलाई विश्राम चाहिन्छ । त्यसैले हामी सुत्छौ । आराम गर्छौ । सुत्नु प्राकृतिक विधि हो, शरीरलाई विश्राम दिने । हाम्रो सुताइ फितलो भयो भने त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । किनभने स्वस्थ्य शरीरका निम्ती गहिरो निन्द्रा अनिवार्य सर्त हो । जब हामीलाई राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन, तब थकान महसुस हुन्छ । शरीर भद्दा हुन्छ । दिनभरको कार्यतालिका गडबड हुन्छ । मन चंगा हुँदैन । फुर्ति हराउँछ । त्यति मात्र होइन, अनिन्द्रा एवं फितलो निन्द्राले रोग निम्त्याउँछ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायत हृदयसम्बन्धी रोगको कारक बन्छ यो । शरीर स्वस्थ्य हुन गहिरो निन्द्रा हुनैपर्छ । तर, कसरी पाउने गहिरो निन्द्रा ? यसकारण आवश्यक गहिरो निन्द्रा जब तपाईंलाई निन्द्रा लाग्छ, तब शरीरका अंगहरू निस्क्रिय हुन थाल्छ । शिथिल हुन्छ । त्यसैले मस्त सुतेपछि पुन तपाईको शरीरमा नयाँ स्फुर्ति आउँछ ।
– सुतेको समयमा नयाँ कोशिका पैदा हुन्छ र एन्टी बडिज उत्पन्न हुन्छ ।
– निन्द्रा राम्ररी लागेन भने त्यसको असर स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैमा पर्छ । कसरी पाउने ?
– गहिरो निन्द्राका लागि सक्रिय दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । शारीरिक गतिविधिलाई बढाउनुहोस् । घरको काम गर्ने, हिँड्ने, खेल्ने, व्यायाम गर्ने गतिविधि जारी राख्नुहोस् ।
– बिहान चाँडै उठ्ने प्रयास गरौं र मर्निङवाकमा निस्कने गरौं ।
– संभव भएसम्म खुट्टाको भागलाई थोरै उँचो बनाउनुहोस् । यो सुत्नेको आदर्श तरिका हो ।
– निन्द्राकाका लागि कुनै औषधी सेवन गर्नु ठीक होइन । त्यसले प्राकृतिक निन्द्रा दिँदैन । बरु टाउको दुख्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्या निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।
– शयन कक्षमा यस्तो सामग्री नराखौं, जसले निन्द्रा बिथोल्छ । जस्तो टेलिभिजन, कम्प्युटर आदि नराखौ ।
– चामल, आलुजस्ता भोजन रातको समयमा गर्नु उचित हुँदैन । म्यागनेसियमले भरपुर भोजन गर्नुहोस्, जसले गहिरो निन्द्रा लाग्छ ।
– कोठामाको तापमान सन्तुलित हुनुपर्छ ।
– खुट्टा पैतालामा तातो सस्र्युंको तेलले मसाज गर्नुहोस्, यसले पनि गहिरो निन्द्रा लाग्छ ।
– सुत्नुअघि सबै उपकरण बन्द गरौं, जस्तो कि मोबाइल, टिभी ।
Prevभारतीय प्रहरीको कडा जाँचले ढुवानी प्रभावित
बिम्स्टेक महासचिव राजधानीमाNext